Apple oo soo saartay qalab lagula socdo dhaq-dhaqaaqa qofka xilliga uu hurdo - Halbeeg News
Sharikadda Apple ayaa daaha ka rogtay qalab ku cusub dunida teknoolajiyada kaasoo kormeer joogta ah ku samaynaya dhammaan dhaq-dhaaqyada qofka adeegsanaya xilliga uu hurdayo.
Qalabkan cusub ayaa loogu yeedhaa(Beddit 3.5 sleep monitor) wuxuuna awood u leeyahay ka warheynta heerka garaaca wadnaha, neefsashada iyo khuurada qofka marka uu hurdayo taasoo ay sii dheertahay cabbirka heerkulka jidhka iyo inta uu la ekaa waqtiga uu qofku hurdayay.
Soo saarista qalabkan oo si aad ah indhaha loogu hayay ayay kal hore qalinka ku duugeen guddiga xiriirka iyo arrimaha teknoolajiyadda dalka mareykanka.
Adeegsadaha qalabka ayaa looga baahanyahay kaliya in uu qalabkan oo cabbirkiisu yahay 2ml inuu galiyo barkintiisa hoosteeda isaga oo dhammaan howlihii uu qabtayna si farriin qoraaleed ah ugu diri doona teleefankaaga amaba saacaddaada Apple-ka ah.
Qofka adeegsada qalabkan yar ee casriga ah ayaa si fudud ku heli kara warbixinnadii ku saabsanaa naftiisa ee la diiwaan galiyay intii uu hurday oo waliba si xirfadeysan loogu sii keydiyay.
Beddit 3.5 waa agabkii ugu casrisanaa ee loo soo saaro maareynta dhaqdhaqaaqa aadaanaha kolka uu ku guda jiro hurdada walow sharikad laga leeyahay dalka Finland ay bishii May ee sanadkii hore ay soo saartay agab kan la mid ah oo lagu kormeero dhaqdhaaqa qofka xilliyada hurdada.
Qalabka ayaad imika ka iibsan kartaa barta internetka ee sharikadda Apple iyada oo qiimahiisuna yahay 150 doollar oo qudha.
Theresa May oo ku guul dareysatay iney baarlamaanka horgeyso qorsheheeda ka bixista Midowga Yurub